Education (ပညာရေး) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
Alumni (ကျောင်းသူ/သားဟောင်း) (0/2)
EBooks | အီလက်ထရောနစ် စာအုပ်များ (0/11)
Education Services (ဝန်ဆောင်မှု) (0/3)
International Schools in Yangon (0/11)
Learning Myanmar Language (0/5)
Libraries | စာကြည့်တိုက်များ (0/5)
Monastic Education School (ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း) (0/1)
Schools (ကျောင်း) (0/23)
Tuition (ကျူရှင် သင်တန်းများ) (0/0)
Universities (တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်) (0/15)
မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန Featured
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန Featured
ရုံးအမှတ်(၁၃)၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန? နေပြည်တော်
MDEP: Myanmar Digital Education Platform Featured
အမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)
အခြေခံပညာရေး (DBE Box)
နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး (TVET)
တက္ကသိုလ်ပညာရေး (University Education)
MYEO, youth development social enterpris...
MYEO isayouth development social enterprise based in Yangon, Myanmar, bridging this gap between the skills you need to acquire that next opportunity. Starting in 2014 asauniversity project, MYEO was created to bring much needed youth development resources empowering young people to overcome personal, educational and professional development challenges. In that time MYEO has developed intoasignificant community of users who we like to call MYEOers!
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း64
Snow home teaching guide service
မူလတန်း မှ အထက်တန်းထိ စာသင် / စာကျက် အိမ်လိုက်သင်ပေးပါသည်။ home teaching guide service ကပါ။ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကတော့ဘွဲ့ရပြီး အတွေ့ကြုံ အနည်းဆုံး7နှစ် အထက် ရှိတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေပါပဲ။လိုအပ်ပါက ph-09786769872 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Dual Tech Institute for Vacational Educa...
No(206/2), Yankin Road, 12 Lonetan Busstop(Corner of traffic signal), Yankin Townshop,Yangon.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း82
eTekkatho is run from The University of Manchester
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း209
European Education Center – Myanmar (EEC) isanew education service offering courses for those interested in cooperation with the European Union and other Western countries as well as those with an interest in the field of international business studies.
Department of Myanmar Examination,
Building (52), Naypyitaw
Conatct No: [+95](67)430168 , [+95](67)430167(Fax).
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း887
Khan Academy Myanmar
Join our emailing list at http://groups.google.com/a/khanacademy.org/forum/#!forum/burmese-translators
Like us on facebook at www.facebook.com/khanacademyburmesetranslation
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း284
Moe Myanmar Language Center
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း1,096
Smart Resources International Education ...
Smart Resources International Education & Consultancy
MWEA Tower # 104, 288/290 Shwe Dagon Pagoda Road,
Phone: +951 374747, 374748, 381610, +959 542 8848
Fax: +951 374748
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း467
British Council	78 Kanna Road
Telephone	+95 (0) 1 254658, 256290, 256291
Fax	+95 (0) 1 245345
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း934
No. Ga (27), Ground Floor, Building E,
(Eco Apartment), Pearl Condo
Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း566
MAT Software Service
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း422
International Language & Business Centre...
ILBC seeks to foster the development of the whole child, one who is academically well-prepared, socially responsible, culturally sensitive and personally fulfilled.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း520
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း302
Myanmar Eye | Myanmar Eye
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း283
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း505
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း220
Reisen-Myanmar.net – Reiseveranstalter in Myanmar (Burma. Birma) bietet Ihnen vorgepante Touren. ma
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း239
Projet ZAY-TA-WUN (Myanmar)
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း361
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း297
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း388
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း201
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း414
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း1,083
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း472
Alumni (ကျောင်းသူ/သားဟောင်း) (2)
EBooks | အီလက်ထရောနစ် စာအုပ်များ (11)
Education Services (ဝန်ဆောင်မှု) (3)
International Schools in Yangon (11)
Learning Myanmar Language (5)
Libraries | စာကြည့်တိုက်များ (5)
Monastic Education School (ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း) (1)
Schools (ကျောင်း) (23)
Tuition (ကျူရှင် သင်တန်းများ) (0)
Universities (တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်) (15)